फोटो फिचर – shubhabihani
रसुवा — रसुवा र नुवाकोट जिल्लाको सिमानामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक तिर्थस्थल वेत्रावतीमा माघे संक्रान्ति पर्वको अवसरमा १० हल गोरुले मैदानमा प्रतिष्पर्दा गरेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष मकर संक्रान्तिका दिन रसुवा र नुवाकोट जिल्लाको सिमाना वेत्रावतीमा गोरु जुधाउने परम्परा रहिआएको छ । यस वर्ष पनि बीस जना कृषकले आफूले पालेको बलिया गोरु जुधाउन वेत्रावतीमा ल्याएका थिए । विसं १८४९ असोज १७ गते नेपाल र चीनबीच वेत्रावतीमा भएको सन्धीको खुसियालीमा गोरु जुधाउने मेला हुँदै आइरहेको गोसाईंकुण्ड युवा क्लबका अध्यक्ष सुरज लबटले बताए ।
विगतका वर्षहरुमा परम्परामा मात्र सिमित रहेको गोरु जुधाउने मेला १२ वर्ष यतादेखि वेत्रावतीका स्थानीय बासिन्दाहरुले गोसाईंकुण्ड युवा क्लब मार्फत व्यवस्थित तरिकाले गर्दै आएका छन् ।
उता नुवाकोटको तारुका र पञ्चकन्यामा पनि गोरु जुधाई मेला आयोजना भएको छ । तार्केश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ तारुकामा २० हल गोरुलाई जुधाइएको छ । बझांङ्गी राजकुमार जयपृथ्विबहादुर सिंहको मावली गाँउ तारुका आउँदा उनलाई मनोरञ्जन दिन जुधाईएको गोरुलाई स्थानीयवासीले निरन्तरता दिंदै आहिले संस्कृति, परम्परा र पर्यटन प्रबद्र्धनसंग जोडेर व्यवस्थित रुपमा निरन्तरता दिंदै आइएको छ । रसुवा र नुवाकोटका स्यानीय कृषकले गोरु जुधाउनको लागि वर्षभरी तागतिलो कुराहरु खुवाएर पालेका गोरु ल्याई यो मेलामा प्रतिष्पर्दा गराइने प्रचलन रहेको छ ।
हजारौं मानिसहरुले गोरु जुधाउने मेलाको अवलोकन गरेका छन् । प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने गोरु धनीहरुलाई क्रमश: तीन हजार र दुई हजार पाँचसय नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुका साथै जुधारु गोरुलाई भिटामिनको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । जुधाईमा भाग लिएका गोरुको बिमा समेत गरिएको थियो ।
मंसिर १८, २०७४-बुढानिलकण्ठ नगरपालिका २ स्थित तल्लो भंगालमा कार्यकर्ता साढे १० बजे जम्मा भएर घरदैलो गर्ने कार्यक्रम थियो । सोहीअनुसार तपस्थली बृद्धाश्रममा जम्मा भएर कांग्रेस कार्यकर्ताले घरदैलो सुरु गरे ।
धरान, ११ असार । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सांसद एवम् केन्द्रीय सदस्य महिम लिम्बुप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिएका छन् ।
धरानस्थित लिम्बुको निवासमा राखिएको शवमा आइतबार बिहान ओलीसहितका एमालेका नेताहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिएका हुन् । ओलीले लिम्बुको पार्थिव शरीरमा एमालेको झण्डासमेत ओढाएका थिए ।
लिम्बुको शनिबार साँझ धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।
क्लोई लसेड र जेम्स नवविवाहित दम्पत्ति हुन् । दुवै एक-अर्काको साथ पाएर रमाइरहेका छन् ।
तर, २९ वषर्ीय जेम्ससँगको प्रेमलाई लिएर २३ वर्षीया क्लोईले सुरुमा आफ्नो परिवारबाट ठूलै विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । यसको कारण थियो, जेम्स एउटा असाधारण आनुबंशीक बिमारीले गर्दा होचोपनाको शिकार हुनु ।
क्लाईले बताउँदैछिन् कसरी उनी एउटा होचो व्यक्तिसँग प्रेममा परिन्ः
फोनको घन्टी बज्दा म डराएँ । म आमालाई आफ्नो नयाँ ब्वाइफ्रेण्डको विषयमा बताउने योजनामा थिएँ ।
जब मैले आमालाई आफ्नो नयाँ ब्वाइफ्रेण्डको नाम सुनाएँ, उहाँ आक्रोशित बन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘किन ? जेम्स त पुड्को छ । उसँग तिम्रो जोडी मिल्दैन ।’
मेरी आमा यो कुरा महसुस गर्न सक्नुहुन्नथ्यो कि जेम्समा मैले के देखेकी छु । जेम्स जन्मजात डायसट्रोफिक डिसप्लेजिया नामको रोगबाट पीडित थियो । यो एउटा असाधारण आनुवंशीक स्थिति हो जसमा मानिस पुड्कोपनाको चपेटामा पर्छन् ।
जेम्सका बुवा र आमा दुवैको उचाई ठीकठाक छ । जेम्स केवल तीन फुट सात इन्चको छ, जबकि म पाँच फिट सात इन्चकी छु । आमाको प्रतिक्रिया सुनेर मलाई रिस उठ्यो । आखिर किन उहाँले जेम्सलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न ?
मैले धेरै केटाहरु देखेकी छु तर, मेरो मनमा सँधै लामो समयको पार्टनरको चाहना रह्यो । पाँच वर्षको उमेरमा नै म चर्चमा हुर्किएँ । यस्तोमा सँधै नै मेरो लागि विवाह महत्वपूर्ण थियो । मलाई लाग्छ कि म यस विषयमा पारम्परिक छु ।
म कसैसँग केवल डेटिङमा हिँड्न चाहन्नथेँ । म आफैंलाई सोध्ने गर्थेँ, के यो केटा मसँग बिहेका लागि योग्य छ ? यदि छैन भने म उसँग के गरिरहेकी छु ? साँचो कुरा यही हो कि जब हामी पहिलोपटक भेट्यौं, मलाई लागेको थिएन कि जेम्स मेरो ब्वाइप|mेन्ड बन्न योग्य छ । उसको जस्तो अवस्था थियो, यस्तो लाग्दैनथ्यो कि हामी एक हुन सक्छौं ।
उ मेरो साथीको साथी थियो । र, हामी एक-अर्कालाई चिन्थ्यौं । तर, हामी सन् २०१२ को मेमा साथी बन्यौं, जब उ ओलम्पिक टर्च लिएर वेल्स आयो । उसले ओलम्पिक टर्च यसकारण उठायो ताकि अक्षम मानिने व्यक्तिहरु पनि खेलतर्फ आकषिर्त हुन सकुन् ।
उ ड्वार्फ स्पोर्टस एसोसियसनमा नौ वर्ष ब्रिटिश क्लास वान ब्याडमिन्टन च्याम्पियन थियो । पछि ब्रिटिश प्रतिनिधिको रुपमा २००८ मा चीन गएपछि ओलम्पिक टर्च उठाउनका लागि उसको चयन स्वभाविक थियो । म उसका साथीहरुसँग त्यो हेर्न गएकी थिएँ ।
त्यहाँ मेरो उसँग भेट भयो । उसको परिवारलाई पनि भेटेँ । मैले उसलाई यसकारण मन पराएँ कि उ हरतरहले बिन्दास व्यक्ति हो । यसका साथै उ एक सकारात्मक सोच भएको मान्छे पनि हो ।
यद्यपि, त्यतिबेला म अरु कसैसँग डेट गरिरहेकी थिएँ । जबसम्म जेम्सले मलाई प्रस्ताव राखेन, मैले आफ्नो प्रेमीसँग ब्रेकअप लिइनँ ।
त्यतिबेला म कार्डिफमा पढिरहेकी थिएँ । त्यसैले उसले मलाई टेक्स्ट म्यासेज गरेर आफूसँग डेट गर्ने प्रस्ताव राख्यो । मैले सकारात्मक जवाफ दिएँ । उ निकै खुशी भयो । हाम्रो पहिलो डेटिङ मे २०१३ मा भयो र विवाहसम्म पुग्न लामो समय लाग्यो । किनकी हामी दुवै आ-आफ्नो जिन्दगीमा व्यस्त थियौं ।
केही समयसम्म हामीले यो सम्वन्धलाई गोप्य राख्यौं । यो सम्वन्धलाई लिएर मभित्र एक किसिमको उथलपुथल चलिरहेको थियो । कहिले लाग्थ्यो, मानिसहरुले के सोच्लान्, के भन्लान् ? खासगरी मेरी आमाले के भन्लिन् ?
मलाई यो सम्वन्धलाई अघि बढाउन निकै चुनौति थियो । तर, मैले अगाडि बढ्ने निर्णय गरेँ । एक दिन म आफ्नी आमा र बहिनीसँग सपिङमा गएँ र अचानक जेम्स त्यहीँ भेटियो । म त्यतिबेला कत्ति पनि लजाइनँ, तर मसँग कुनै शब्द पनि थिएन ।
म सेप्टेम्बरमा यूनिभर्सिटी फर्किएपछि यो सम्वन्धलाई सार्वजनिक गरिदिएँ ।
मेरी आमा सिंगल मदर हुन् । उनी म र मेरी दुई बहिनीको विषयमा ज्यादै सतर्क छिन् । पछि मेरी आमाले पनि कुरा बुझिन् । अब उनलाई जेम्सको विषयमा कुनै दुखेसो छैन ।
विषय केवल लुक्सको होइन । जेम्स मेरो लागि सँधै आकर्षक छ र म उसको लागि ।
अघिल्लो वर्षको अगष्टमा हाम्रो बिहे भयो । यो मेरो जीवनकै सबैभन्दा खुशीको पल थियो । म उसँग आफ्नो सिंगो जीवन बिताउनका लागि निकै उत्साहित छु । हामी दुवै मिलेर काम गर्छौं । एक-अर्कालाई ज्यादै माया गर्छौं । उ होचो भएर के भो, हाम्रो प्रेम अग्लो छ ।
१५ फागुन । जब तपाई इलामको माइपोखरीबाट उत्तर-पश्चिमतर्फ मोडिनुहुनेछ, तपाईको आँखामा भारतीय फिल्म ‘माझीः द माउन्टेन म्यान’ को सजीव दृश्य नाच्न थाल्छ । अथवा तपाईलाई याद आउँछ, चिनियाँ लोक उखानमा चर्चित ‘पहाड पल्टाउने मूर्ख बूढो’ को ।
भारतको विकट गाउँका ‘दशरथ माझी’ले २५ फुट अग्लो पहाड काटेर मोटरबाटो बनाए, पत्नी वियोगको पीडा भुल्न । चट्टाने पहरामा काम गरिरहेको माझीलाई खाना पुर्‍याउन गएकी गर्भवती पत्नी जब ढुंगामा चिप्लिएर ज्यान गुमाइन्, तब दशरथ माझी पहाड छेड्न तम्सिए । उनले निरन्तर २५ वर्ष त्यही ढुंगे पहरामा छिनो र हतौडा चलाइरहे । अन्ततः ३६० फुट लामो मोटरबाटो तयार भयो । यो मोटरबाटो नै माझीको विकट गाउँलाई शहरसँग जोड्ने सेतु बन्यो ।
दशरथ माझीको यही जीवनगाथालाई फिल्मांकन गरिएको छ, माझी द माउन्टेन म्यानमा । नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनित यो सिनेमा हेरेपछि इलामका डम्बरसिंह सुनुवारको सम्झना ताजा बनेर आउँछ ।
चिनियाँ नेता माओले आफ्नो रचनामा ‘पहाड पल्टाउने मूर्ख बूढो’ को चर्चा गरेका छन् ।
एक वृद्धले निरन्तर पहाड खोस्रिइरहन्छन् । अचम्म मानेर मान्छेले सोध्छन्, यसरी साबेलले एक्लै किन पहाड खोस्रेको ? वृद्धले जवाफ दिन्छन्- यो डाँडाले मेरो घरको घाम छेकेको हुनाले खनेको हुँ । प्रश्न उठ्छ- यसरी खनेर पहाड सम्याउन सकिन्छ त ? जवाफ आउँछ- म यसैगरी खनिरहन्छु, मेरा छोराहरुले खन्छन् । सन्तानहरुले खन्छन् । त्यसपछि एक दिन भगवानले सर्लक्कै यो पहाड उठाएर हटाइदिन्छन् ।
एक्लै पहाड पल्टाइरहेका डम्बरसिंहलाई देख्दा यस्तो लाग्छ- चिनियाँ नेता माओले उधृत गरेका ‘पहाड पल्टाउने मूर्ख बूढो’ यिनै हुन् ।
नेपाली ‘माउन्टेन म्यान’
यो दृश्य इलाम जिल्लाको हो । ९० हिउँद खेपेको कुप्रो ज्यान । जो, पत्रे चट्टानमाथि छिनो र हथौडाले एकनास ठुंगिरहेको छ । तिनले छाड्दै गएको पदचापमा सुन्दर बाटो छ, सानो जलकुण्ड छ, ढुंगे चौतारो छ, छानोविहीन मन्दिर छ, अनौठो मुहार-आकृति छ । र, नयाँ स्वरुप ग्रहण गर्दै गरेको सिंगै डाँडो छ ।
यो बुकी फूल्ने रुखो डाँडाले अब कस्तो रुप धारण गर्ला ?
यसको खास आकृति केवल डम्बरसिंह सुनुवारको उर्बर मस्तिष्कमा मात्र छ । र, त्यसैलाई साकार रुप दिन हो, उनले रातदिन खटेको । भोक तीर्खा सहेको । चर्को घाम र कठ्यागि्रँदो चिसो झेलेको ।
तिनका खस्रा हातले पटक्कै विश्राम लिएका छैनन् । चाहुरिएर मुजा-मुजा परेको अनुहारमा थकानको कुनै संकेत देखिँदैन । यी बुढा दृढ छन्ः चट्टान फोरेर त्यसमा आफ्ना लालाबालाको आकृति कुँद्न । आफ्नै आँखाको सामुन्ने गोली लागेर रत्ताम्मे भई ढलेका सन्तानलाई उनी जीवन्त तुल्याउन चाहन्छन्, ढुंगामै भए पनि ।
चट्टान फोरिरहेका कुप्रा बा
इलामको माइपोखरीबाट देउराली बजारसम्म जाने एउटा सहायक बाटो छ, जसलाई पछ्याउँदै जाँदा डम्बरसिंह सुनुवार भेटिन्छन् ।
उनी या त चोयाले बनाइएको सानो झकमा माटो भर्दै बाटोको खाल्डा पुरिरहेका हुनेछन्, या धारिलो छिनोले ढुंगा चोइट्याइरहेको अवस्थामा भेटिनेछन् । या त झम्पल र साबेलले एक्लै डाँडो कोट्याइरहेका हुनेछन् । अथवा, मार्तोलको सहारामा पर्खाल ठड्याइरहेका हुनेछन् ।
बिहानको उज्यालो नपोखिँदै सुरु हुने डम्बरसिंहको यस्तो दिनचर्या साँझ साखेजुङमाथिको डाँडाबाट घाम नडुबेसम्म जारी रहन्छ । यो उनको पाँच दशक यताको नियमित दैनिकी हो ।
यो ५० वर्षको अवधिमा उनले एउटा सिंगो डाँडालाई कलात्मक रुप दिइसकेका छन् । कतै मन्दिर बनाएका छन्, कतै घुमाउरो बाटो । कतै ढुंगाको मूर्ति राखेका छन् । कतै शिलालेख छ ।
माइपोखरी-देउराली जोड्ने करिव तीन किलोमिटर बाटो उनैले खिपेका हुन्, जो लगभग डेढ मिटर चौडा छ ।
यही बाटोको मध्यतिर डम्बरसिंहको बासस्थान छ, चित्राले बारेको गोठजस्तो । त्यही अध्याँरो कटेरामा उनले रात गुजार्छन् ।
कटेराको पूर्वतिर एउटा मन्दिर छ, छानो हाल्न बाँकी रहेको । त्यससँगैको ढुंगामा दुई मानव आकृति छन्, ती डम्बरसिंहका दुई दिवंगत छोराछोरीको आकृति हो ।
बीचमा उनले एउटा बमको आकृति पनि कुँदेका छन्, टुईञ्च । ‘यही बम हो’ डम्बरसिंहले झर्को मान्दै सुनाए, ‘कहाँबाट उडेर आयो र आँगनमा खेलिरहेका छोराछोरीलाई लाग्यो । उनीहरु रगतको आहालमा छटपटाउन थाले ।’
यसो भनिरहँदा उनका भासिएको आँखा रसाउन पुग्छन् । ‘छोराछोरी मरेपछि विरक्त लाग्यो’ डम्बरसिंह थप्छन्, ‘अनि उनीहरुकै नाममा यी सब कामहरु गरें, गरिरहेको छु ।’
खाएको स्वाद छैन, लगाएको आनन्द छैन
जब नावालक छोराछोरी गुमाए, त्यहीबेलादेखि हो उनको जिब्रोले मीठो-मसिनोको स्वाद पाउन छाडेको । ‘के मीठो, के नमिठो’ डम्बरसिंह भन्छन्, ‘खाना खान बस्दा छोराछोरी सम्झेर मन नै अमिलो हुन्छ ।’
न उनी राम्रो लगाउँछन्, न रमाइलो गर्छन् । घुम्ने, डुल्ने, रमाइलो गर्ने केही इच्छा बाँकी छैन, उनीसँग ।
मैलोले कलेटी परेको एउटा कोट, फाटेको दौरा-सुरुवाल र ढाका टोपीले वर्षौंदेखि उनको आङ ढाकेको छ ।
साँझ कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्ता छैन, न लुगाफाटोको सौख नै । चार/पाँच गास भात एक छाक खान पाए उनलाई पुग्छ । त्यसैले त हो, उनी अविछिन्न आफ्नो कर्ममा लिन हुन सकेको ।
जिल्ला विकास समिति इलामले उनलाई बस्नका लागि घर बनाइदिएको छ । तर, डम्बरसिंह कटेरोमै बस्छन् ।
‘यहाँ सुतेका बेला छोराछोरीलाई सपनामा देख्छु,’ डम्बरसिंह भन्छन्, ‘उनीहरु मसँग खेल्न आउँछन्, पोखरीमा गएर माछासँग खेल्छन् ।’
अनि पहाड खस्यो
पहाडको कुनामा जीवन बिताइरहेका डम्बरसिंहसँग राजनीतिको कुनै लिनु-दिनु थिएन । तर, त्यही राजनीतिक उथलपुथलले उनको जीवनलाई दुःखान्त मोडमा धकेलिदियो । घटना थियो, २०१८ सालमा नेपाली कांग्रेसले चर्काएको ‘सशस्त्र प्रतिरोध आन्दोलन’को ।
सुवर्णशमसेरको कमान्डमा २०१८ साल मंसीरबाट थालेको सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा बिद्रोही र शाही सेनाबीचको गोली हानाहान चलिरहेको थियो ।
डम्बरसिंहका १२ बर्षीय छोरा डिकबहादुर र डेढ बर्षीया छोरी ओममाया आँगनमा खेलिरहेका थिए । त्यहीबेला कतैबाट बत्तिएर आएको बम आँगनमा पड्कियो र आँखै अगाडि दुई छोराछोरीलाई क्षतबिक्षत बनाइदियो । २०१८ माघ २ गतेको यो घटनापछि डम्बरसिंहको खुसी संधैका निम्ति लुटियो । ‘हामी छेवैको बारीमा काम गर्दै थियौं,’ डम्बरसिंहले सम्झिए, ‘हेर्दाहेर्दै नानीहरु रगतपच्छे भएर ढले ।’
यसरी सन्तान गुमाउनुको पीडालाई उनले मनमा संगाल्न सकेनन् । अन्ततः ठूल-ठूला चट्टान फोरेर त्यसैमा आफ्ना मृत नावालक सन्तानको आकृति कुँद्न थाले । यो क्रम अझै जारी छ ।
सबै अधुरो रहला कि ?
शरीर झन्-झन् कुप्रिँदै गएको छ । आँखा मधुरो हुँदै गएका छन् । हातगोडा चाँडै थाक्न थालेका छन् । खिइँदै गएको ज्यानमा तागत हराउँदै गएको छ । यतिबेला उनलाई कताकता डर लाग्छ, ‘कतै आफुले थालेको काम पूरा गर्न नसकिएला कि ?’
‘मन्दिरमा छानो हाल्न बाँकी छ, मूर्तिलाई रंग रोगन गर्न पाएकै छैन’ डम्बरसिंह सुनाउँछन्, ‘कतै कामै पूरा नगरी मरिने पो हो कि ?’
राजनीतिक दलहरुले भाषणमा दोहोर्‍याइरहन्छन्, ‘शोकमा शक्तिलाई बदल्नुपर्छ ।’ तर, कसरी ? उनीहरुसँग जवाफ छैन । जवाफ छ त, डम्बरसिंहसँग ।
यदि सन्तान वियोगकै पीडामा रुमल्लिएका भए उनले यति धेरै कर्म गर्ने थिए होलान् ? यति सुन्दर रचना गर्ने थिए होलान् ?
सन्तान वियोगको पीडा भुल्न उनले आफूलाई त्यही काममा खर्चिए, जसले उनलाई सिजर्नशील बनायो । डम्बरसिंहको जीवनबाट के पनि आँकलन गर्न सकिन्छ भने, एउटा मान्छेले जीवनभर आफ्नो ऊर्जा राम्रो काममा खर्चियो भने कतिसम्म गर्न सक्छन् ।
जुन राजनीतिक उथल-पुथलले डम्बरसिंहलाई यसतर्फ डोहोर्‍यायो, त्यही राजनीतिको नसामा लट्ठीएका तन्नेरीहरु अझै नेताको घर-दैलो चाहर्दैमा आफ्नो उर्बर समय व्यर्थ नष्ट गरिरहेका पो होलान् कि ?
काठमाडौं, ३ माघ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कान्छी छोरीको शीतलनिवासमा धुमधामसँग विवाह गरेर कन्यादान गरेकी छन् ।
सोमबार राष्ट्रपति भवन, शीतलनिवासमा राष्ट्रपति भण्डारीले कान्छी छोरीको विवाह गरिदिएकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डा. निशाकुशुम भण्डारीले ई. अभिषेक यादवलाई स्वयमंवर ग्रहण गर्नुभयो । विहान १० बजेको शुभ साइतमा स्वयमंवर समारोहमा ई. अभिषेक यादवको साथमा उहाँका पिता ई. मुनीलाल यादव तथा माता किरण यादव समेत आफन्तहरुका साथ शीतलनिवास आउनुभएको थियो ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू एवम् उहाँका परिवार र आफन्तजनहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।’
विवाह कार्यक्रममा शुभकामना एवम् आशीर्वाद दिन परिवारजन, आफन्तजन एवम् आमन्त्रित महानुभावहरुको समेत उपस्थिति जनाइएको छ ।
एजेन्सी । रमाईलो गर्नु प्रायः सबैको इच्छा हुन्छ । तर रमाइलो गर्दा आफैंलाई बिर्सिइयो भने चाहिँ त्यसले क्षणिक रमाइलो दिए पनि दीर्घकालमा समस्या र तनाव मात्रै पैदा गर्छ ।
यस्तै भएको छ अष्ट्रेलियामा । सर्फर्स प्याराडाइजमा आयोजित एउटा पार्टीमा स्कुले विद्यार्थीहरुले जमेर उत्पात मच्चाए । स्कूलको बार्षिकोत्सवका अवसरमा पार्टी चलिरहेका बेला विद्यार्थीहरुले रक्सी खाएर बबाल मच्चाएका हुन् ।
नशामा लठ्ठिएपछि विद्यार्थीहरुले हंगामा मच्चाए । छात्राहरुले त सडकमै उत्रिएर उत्पात मच्चाएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यामले जनाएका छन् । विद्यार्थीको उत्पात मच्चिएपछि प्रहरी पुग्यो र उनीहरुलाई पक्राउ गरेर लगेको थियो । प्रहरी पुग्दा कोही बान्ता गरिरहेका थिए, कोही नाचिरहेका थिए भने कोही सडकमै सुतिरहेका थिए । (हेर्नुस् तस्वीर)